Football Khabar » ‘जोभिक रियलले उडाएपछि’ अब बार्सिलोनाको नजरमा को ?
‘जोभिक रियलले उडाएपछि’ अब बार्सिलोनाको नजरमा को ?
स्पेनिस बार्सिलोनाले इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेडका युवा फरवार्ड मार्कुस रासफोर्ड भित्र्याउने चर्चा सुरु भएको छ । आफ्नो मुख्य टार्गेटमा रहेका सर्बियाका २१ वर्षीय युवा फरवार्ड लुका जोभिकलाई रियल मड्रिडले ओभरटेक गरेर अनुबन्ध गरेपछि बार्सिलोनालाई झट्का लागेको छ ।
बार्सिलोना नयाँ सिजनका लागि टोलीका उरुग्वेन फरवार्ड लुइस स्वारेजको स्थानमा युवा खेलाडी भित्र्याउन प्रयास गरिरहेको छ । त्यसका लागि उसले जर्मन क्लब फ्रान्कफुर्टका जोभिकलाई ताकेको थियो । तर, रियलले उनलाई अनुबन्ध गरिकसकेको छ ।
बजारमा उपलब्ध र आफ्नो खेल्ने शैलीसँग फिट हुने खेलाडीको खोजीमा रहेको बार्सिलोनाले इंग्लिस खेलाडी २१ वर्षीय रासफोर्डलाई आक्रमण लाइनमा मेस्सीसँग सेट मिलाउन चाहेको छ ।
स्पेनिस मिडिया ‘मार्सा’ र ‘मुन्डो डेपोर्टिभो’का अनुसार बार्सिलोनाले द्रुत गतिका खेलाडी रासफोर्डलाई १०० मिलियन युरोसम्म खर्चेर अनुबन्ध गर्ने सम्भावना छ । रासफोर्ड युवा भएकाले ३२ वर्षीय फरवार्ड स्वारेजको दीर्घकालीन प्रतिस्थापनसमेत बन्ने बार्सिलोनाले ठानेको छ ।
खबरअनुसार बार्सिलोनाले रासफोर्ड भित्र्याउन सकिने सम्भावनाबारे युनाइटेडसँग पहिलो चरणको छलफलसमेत गरेको बताइएको छ ।
भर्खरै सकिएको सिजनमा रासफोर्डले युनाइटेडका लागि ४३ खेल खेल्दै १२ गोल गरेर ७ गोलका लागि असिस्ट गरेका थिए ।
अहिले सरुवा बजारमा बार्सिलोनाले भित्र्याउन सक्ने खेलाडीको सूचीमा अन्य स्टार खेलाडी पनि छन् । जसमा स्पेनिस सेल्टा भिगोका म्याक्सी गोमेज, इंग्लिस क्लब आर्सनलका अउबामेयाङ, जर्मन खेलाडी टिमो अवार्नरको नामसमेत चर्चामा छ ।
प्रकाशित मिति २५ जेष्ठ २०७६, शनिबार ०७:०७